Härryda | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län / Härryda
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 4 11 2019
Degmada Härryda waxeey ku taal agagaarka Göteorg iyo Borås. Waxaan heysannaa dhul dabiici ah oo qurxoon, eeyna ku yaallaan balliyo iyo keymo badan. Degmada Bartamaheeda waxaa ku yaal garoonka diyaaradaha ee Göteborg Landvetter Airport.
290 kiilomitir oo laba jibaaran
Göteborg 12 kiilomitir
Borås 31 kiilomitir
Degmada Härryda waxey leedahay lix xaafadadood oo waaweyn: Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Härryda, Hällingsjö och Rävlanda. Qiyaas ahaanti kala bar dadka waxey degan yihiin Mölnlycke. Haddii aad raadsaneyso guriga kiro ah ama guri kale ee degmada Härryda waxaad la xariiri kartaa qofka guriga leh iyo kireeyaha si aad u maqasho sida safkooda u geli karto.
Faras magaalaha Mölnlycke wuxuu qiyaastii 10 daqiiqo u jiraa Göteborg. Sawir: Anna Sigvardsson
Degmada Härryda dadka degan 4% waa ajaanib, 14% dadka deganna waxaa dhalay waalidiin ku dhashay wadanka dibaddiisa. Luqadaha afka hooyo ee iskoollada lagu barto waa ingiriis, carabi, iiraani, kurdish iyo albeeniyaan.
Degmada Härryda waxaa ka jira jaaliyado badan sida kuwa isboortiska iyo kuwa dhaqanka. Jaaliyadaha waxeey howlo u qabtaan carruurta iyo dadka waaweyn labadaba. Jaaliyadaha oo dhan waxaad ka heli kartaa liiskeena diiwaan galinta jaaliyadaha.
Gudaha Mölnlycke hoygeeda dhaqanka mar kastaba wax ayaa ka dhaca. Halkan waxaa laga helaa maktabad, barxado bandhigyo iyo maqaaxi. Sawir: Anna Sigvardsson
Degmada Härryda waxaa ku yaal lix xaafadood oo waaweyn, labada ugu weynna waa Mölnlycke iyo Landvetter. Mölnlycke waxaa tusaale ahaan ku yaal xafiiska shaqada, maktabad, guriga degmada, dukaamo, dukaamada gacan labaadka. Landvetter waxaa iyada xataa ku yaal dukaamada qaarkood, adeega guud ee xaafadaha Härryda, Hindås, Hällingsjö iyo Rävlanda wuu xadidan yahay. Maktabado waxeey ku yaallaan xaafadaha Mölnlycke, Landvetter, Hindås iyo Rävlanda.
Degmada Härryda waxaa degan qoysaska ilmooleeyda ah waxaana ku yaal dugsiyada xanaanada carruurta iyo guryaha xanaanda carruurta oo badan. Xaafadaha Mölnlycke, Landvetter, Hindås iyo Rävlanda waxaa ku yaal xanaanadaha furan/xarunta xanaanada carruurta. Waxaad meeshaan kub aran kartaa waalidiinta inta eey carruurta isla cayaarayaan. Waa wakhti u fiican waalidiinta iyo carruurtaba waana bilaash.
Degmadan waxaa ku yaala dugsiyo xanaano oo badan iyo hoyga maalinti caruurta lagu xanaaneeyo. Sawir: Anna Sigvardsson
Degmada Härryda waxaa ku yaal 18 dugsiyo hoosedhexe, waxeeyna ku kala yaallaan xaafadaha Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Härryda, Hällingsjö iyo Rävlanda. Mölnlycke waxaa ku yaal dugsiga sare ee Hulebäcksgymnasiet. Waa iskool caan ah isla markaasna leh barnaamijyo waxbarashadeed badan waxaana dhigta arday ka kala socoto gobolka Göteborg oo dhan.
Degmadan dadkeedu waa da'yar, boqolkiiba 26 waxay ka yaryihiin 17 sanno. Sawir: Anna Sigvardsson
Bartamaha Mölnlycke waxaa ku yaal iskoolka waxbarashada dadka waaweyn oo leh lokaallo qurux badan. Meeshaan waxbarashada waa lacag la'aan, waxaad gadaneeysaa buugaagtaada iyo qalabkaada waxbarasho oo kaliyah. Waxyaabaha iskoolka dadka waaweyn lagu barto waxaa ka mid ah: iswiidhiska labaro qaxootiga (sfi), heer waxbarasho oo ah dugsi hoosedhexe iyo dugsi sare iyo waxbarashada xirfadaha.
Waxaa jir arugag caafimaad oo ku yaal xaafadaha Mölnlycke, Landvetter iyo Hindås. Waxaa jira rug caafimaadka carruurta ah oo ku yaal xaafadaha Mölnlycke, Landvetter iyo Hindås. Hadaad u baahan tahay daryeel caawimaad habeennada iyo maalmaha fasaxa ah waxaad tagtaa isbitaalka Mölndals sjukhus. Daryeelka ilkaha waxuu ku yaal xaafadaha Mölnlycke, Landvetter iyo Hindås.
Markaad kulan ku leedahay xafiisyada dowladda ee degmada iyo xafiiska daryeelka qoyska iyo qofka waxaa laguu diyaarinayaa turjubaan.
Waxaa jira basas isku kala goosha Göteborg iyo Mölnlycke oo 10 daqiiqo oo kaliya qaadanaya baska u dhaxeeya Göteborg iyo Landvetter waxuu qaadanayaa 20 daqiiqo oo kaliya. Baska u dhaxeeya Landvetter iyo Borås waxuu qaadanayaa qiyaastii 50 daqiiqo oo kaliya. Warbixinta ku saabsan gaadiidka dadweynaha oo dhan waxaad ka heleysaa shirkadda basaska ee Västtrafik.
Degmada Bartamaheeda waxaa ku yaal garoonka diyaaradaha ee Göteborg Landvetter Airport.
Garoonka diyaaradaha ee Göteborg Landvetter Airport waa degmada meesheeda ugu weyn ee loo shaqo tago. Waxaa halkaan ka shaqeeya illaa 4 000 oo qofood oo ka kala shaqeeya boqolaal shirkadood oo kala duwan. Degmada Härryda waa shaqa bixiyaha ugu weyn, waxaa shaqooyinka aan bixina kala yihiin, kuwa iskoollada xanaanada, iskoollada caadiga ah, caafimaadka iyo daryeelka.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Härryda